« Can 2017 » : mitetika haka ny amboara fanimbalony i Ejypta | NewsMada
« Can 2017 » : mitetika haka ny amboara fanimbalony i Ejypta
Hisantatra ny manasa-dalana voalohany anio alina amin’ny Can 2017, taranja baolina kitra, tanterahina any Gabon ny fihaonana eo amin’i Borkina Faso sy i Ejypta. Miketrika ny hibata ity amboara ity ny Faraona, rehefa tsy hita taona maro teo amin’ny sehatra afrikanina.
Tonga amin’ny tsontsori-mamba isarahana. Hipetraka eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra Ejypsianina izao hiakarany amin’ny manasa-dalana sy niverenany indray eo anivon’ny Can izao. Hifandona amin’ny Les Etalons-n’i Burkina Faso izy ireo. Laharana fahatelo, nibata ny medaly volafotsy ny Borkinabe tamin’ny Can 2013, raha efa nahazo ny Can impito kosa ny Faraona. Nanomboka ny taona 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ary ny taona 2010 izany anaram-boninahitra azon’izy ireo izany. Taorian’izany, tsy hita intsony ny Ejypsianina, noho ny krizy politika tany an-toerana. Anisan’ny andrandrain’ny maro ny Faraona amin’ity Can ity ary mandeha aza ny tombana fa hanao ny famaranana amin’ny Kintana maintin’i Ghana izy ireo. Efa nihaona teny anivon’ny fifanintsanana teo amin’ny sokajy D izy ireo ary noresen’ny Ejypsianina tamin’ny isa tokana, 1 noho 0 ny Ganeanina.
Hifampitana i Ghana sy i Kameronina
Etsy andaniny, tsy mbola resy mihitsy ny Faraona hatramin’ny nanombohan’ity Can ity. Tahaka izany koa ny Borkinabe, nandresy sy nanao ady sahala tamin’ireo lalao rehetra nataony. Araka izany, hiady ny manasa-dalana, anio alina.
Ho an’ ny rahampitso kosa, hifandona eo amin’ny manasa-dalana faharoa ary anisan’ny lalao andraisan’ny maro ny fihaonana eo amin’ny Kintana maintin’i Ghana sy ny Liona tsy voafolaka Kameroney. Nanamarika ny tantaran’ny Can ireto ekipa roa ireto. Samy efa nibata ny tompon’ny anaram-boninahitra inefatra ny Kintana mainty sy ny Liona tsy voafolaka.